Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Galeshia 4:1-31
Unu abụghịzi ndị ohu, unu bụ ụmụ (1-7)
Pọl kwuru ihe na-echegbu ya banyere ndị Galeshia (8-20)
Hega na Sera pụtara ọgbụgba ndụ abụọ (21-31)
Jeruselem dị n’elu nweere onwe ya, ọ bụkwa nne anyị (26)
4 Ma m na-agwa unu na ọ bụrụhaala na onye ga-eketa ihe nna ya ka bụ nwata, e nweghị ihe dị iche ya na ohu, n’agbanyeghị na ọ bụ ya nwe ihe niile. 2 Kama ọ na-anọ n’okpuru ndị na-elekọta ya nakwa n’okpuru ndị na-elekọta ụlọ ruo ụbọchị nna ya kara aka. 3 Otú ahụ ka ọ dịkwa anyị. Mgbe anyị bụ ụmụntakịrị, anyị bụ ndị ohu maka na anyị nọ na-ele ihe anya otú ụwa si ele ya.*+ 4 Ma mgbe oge a kara aka ruru, Chineke zitere Ọkpara ya, bụ́ onye nwaanyị mụrụ,+ onye nọkwa n’okpuru iwu,+ 5 ka o wee zụrụ ndị nọ n’okpuru iwu ma tọhapụ ha,+ ka e wee mee ka anyị bụrụ ụmụ Chineke.+ 6 Ebe ọ bụ na unu bụ ụmụ, Chineke etinyela mmụọ+ nke Ọkpara ya n’obi anyị.+ Mmụọ ahụ na-etikwa mkpu, sị: “Aba,* Nna!”+ 7 N’ihi ya, onye ọ bụla n’ime unu abụghịzi ohu, kama ọ bụ nwa. Ọ bụrụkwa na ọ bụ nwa, o sorola ná ndị Chineke mere ka ha bụrụ ndị ga-eketa ihe.+ 8 Ma mgbe unu na-amaghị Chineke, unu nọ na-agbara chi ụgha dị iche iche ohu. 9 Ma ugbu a unu matarala Chineke, ma ọ bụkwanụ ugbu a Chineke matarala unu, gịnịzi mere unu ji na-alaghachi n’ihe ndị na-enweghị isi+ na ihe ndị na-abaghị uru dị n’ụwa ma na-achọ ka unu gbawara ha ohu ọzọ?+ 10 Unu na-agbasi mbọ ike na-edebe ụbọchị na ọnwa+ na oge a kara aka na afọ. 11 Egwu na-atụ m, n’ihi na ọ dị ka mbọ niile m gbara n’isi unu efuola ọhịa. 12 Ụmụnna m, ana m arịọ unu ka unu dịrị ka m, n’ihi na e nwekwara mgbe m dị ka unu.+ Unu emeghị m ihe ọjọọ ọ bụla. 13 Ma unu ma na ọ bụ ọrịa m rịara mere m ji nweta ohere mbụ m ji zie unu ozi ọma. 14 N’agbanyeghị na ọrịa m bụụrụ unu ọnwụnwa, unu eledaghị m anya ma ọ bụ sọwa m oyi.* Kama unu nabatara m ka à ga-asị na m bụ mmụọ ozi Chineke ma ọ bụkwanụ Kraịst Jizọs. 15 Oleezi ihe mere na obi adịkwaghị unu ụtọ? N’ihi na o doro m anya na ọ bụrụ na o kwere unu omume, unu gaara aghụpụta anya unu nye m.+ 16 M̀ ghọziela onye iro unu maka na m na-agwa unu eziokwu? 17 Ihe mere ha ji agbasi mbọ ike ka ha nweta unu abụghị na ha buuru unu ihe ọma n’obi, kama ha chọrọ ime ka mụ na unu kwụsị ịdị ná mma, ka unu wee sosiwe ha ike. 18 Ma, ọ bụghị ihe ọjọọ ma mmadụ gbasiwe mbọ ike ka o nweta unu, ọ bụrụhaala na o buuru unu ihe ọma n’obi. O kwesịghịkwa ịbụ naanị mgbe mụ na unu nọ, kama o kwesịrị ịbụ n’oge niile. 19 Ụmụntakịrị m,+ otú ahụ́ si afụ nwaanyị ụfụ mgbe ọ na-amụ nwa ka ahụ́ na-afụ m ụfụ ọzọ n’ihi unu. Ọ ga na-afụ m ụfụ ruo mgbe unu ga-akpawa àgwà ka Kraịst. 20 Ọ dị m ka ya bụrụ na mụ na unu nọ ugbu a ka m si otú ọzọ gwa unu okwu, n’ihi na ihe unu na-eme gbagwojuru m anya. 21 Gwanụ m, unu ndị chọrọ ka iwu na-achị unu, ọ̀ bụ na unu amaghị ihe Iwu ahụ* na-ekwu? 22 Dị ka ihe atụ, e dere na Ebreham mụtara ụmụ abụọ. Nwa agbọghọ na-ejere ya ozi mụụrụ ya otu,+ nwaanyị nke nweere onwe ya amụọrọ ya otu.+ 23 Ma a mụrụ nwa nke nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi otú e si amụ ụmụaka ndị ọzọ,+ mụọ nwa nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya n’ihi nkwa e kwere.+ 24 E nwere ike iwere ihe ndị a ka ihe atụ nke nwere ihe ọ pụtara; n’ihi na ụmụ nwaanyị ndị a pụtara ọgbụgba ndụ abụọ. Nke a gbara n’Ugwu Saịnaị+ bụ Hega. Ụmụ niile ọ na-amụ bụ ndị ohu. 25 Hega pụtara Saịnaị,+ bụ́ ugwu dị n’Arebia. Ọ nọchiri anya Jeruselem dị ugbu a, n’ihi na Jeruselem na ụmụ ya bụ ndị ohu. 26 Ma Jeruselem nke dị n’elu nweere onwe ya, ọ bụkwa ya bụ nne anyị. 27 N’ihi na e dere, sị: “Nwaanyị aga, ṅụrịa ọṅụ. Nwaanyị ime na-emetụbeghị, tie mkpu ọṅụ; n’ihi na ụmụ nke nwaanyị di ya jụrụ* dị ọtụtụ karịa ụmụ nke nwaanyị nwere di.”+ 28 Ụmụnna m, unu bụ ụmụ a mụrụ n’ihi nkwa e kwere, otú Aịzik bụ.+ 29 N’oge ahụ, nke a mụrụ otú e si amụ ụmụaka ndị ọzọ malitere ịkpagbu nke e si n’ike mmụọ nsọ mụọ.+ Otú ahụ ka ọ dịkwa taa.+ 30 Ma, gịnị ka e kwuru n’Akwụkwọ Nsọ? “Chụpụ nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi na nwa ya, n’ihi na nwa nwa agbọghọ ahụ na-eje ozi agaghị eso nwa nke nwaanyị ahụ nweere onwe ya keta akụnụba gị.”+ 31 N’ihi ya, ụmụnna m, anyị bụ ụmụ nwaanyị ahụ nweere onwe ya. Anyị abụghị ụmụ nwa agbọghọ na-eje ozi.
^ Na Grik, “anyị nọ na-agbara ihe ndị mbụ nke ụwa ohu.”
^ Ma ọ bụ “gbụọ m asọ mmiri.”
^ Ma ọ bụ “nwaanyị aga.”